Pro Evolution Soccer6PC Games Full (203 MB) ~ ဘလော့ခရီးသည်
Pro Evolution Soccer6PC Games Full (203 MB)
PC Games ဂိမ်းတွေကို မတင်တာ ကြာပြီဆိုတော့ အဟောင်းလေးဖြစ်တဲ့ ဖိုဒ်ဆိုဒ်အသေးဆုံး ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဘယ်လောက်ပင် ဆော့ကစား မရိုးတဲ့ ဘောလုံးဂိမ်းလေးကို အားလုံးသော ကွန်ပျူတာ စက်တွေမှာ အသုံးပြု ဆော့ကစားရတဲ့ Pro Evolution Soccer6PC Games Full လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီဂိမ်းဆိုရင်ဖြင့် Install ပြုလုပ်ရုံနဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာတကာ ရွေးချယ်ပြီး အလွယ်ဆုံး ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးဂိမ်း ချစ်သူများကတော့ လုံးဝ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
ဒေါင်းရလွယ်အောင်လို့လည်း RAR တစ်ဖိုင်တည်းဖြင့် တင်ပေးထားပါတယ်။
Windows XP / Vista/ 7/ 8/ 8.1 /10/ (32 Bit & 64 Bit) အားလုံးမှာ ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Here you are Pro Evolution Soccer 6, the latest version for one of the best football games in history.
Now you will enjoy more real players, new movements and skills, more reality, more real teams,... in short, more football, more PES 6.
You will be able to play on your own, with your friends or online, you decide your game mode for today, PES6 will offer you what you need.
Choose your team and become the new Ronaldinho, Cesc, Rooney or Cristiano Ronaldo when playing Pro Evolution Soccer, probably the best and most playable football game you've ever played.
It's time for football, it's time for Pro Evolution Soccer 6.